Fahavaratra any Paris, ny dobo tsara indrindra hangatsiatsiaka | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | mpitarika, Paris
Paris Tsy anisan'ny tanàna mafana indrindra any Eropa izy io, lavitra an'i Madrid, ohatra, fa indraindray tonga ny onja hafanana ka mahatonga anao maniry hangatsiaka kely.
Marina fa misy ny "Seine beach" malaza fa tsy misy manomboka milomano na mikororoka ao anaty rano, ka raha ilaina ny mandentika ny vatana amin'ny rano madio ... dia mila mankany amin'ny dobo filomanosana ianao. Raha manana hotely manana trano tsara lavitra ianao, nefa misy dobo monisipaly sy dobo manokana. Soraty ity fampahalalana ity.
1 Fahavaratra sy dobo filomanosana any Paris
3 Ponto Pontoise
Fahavaratra sy dobo filomanosana any Paris
Raha mila fasika sy ranomasina ianao dia misy izany any Paris hahitana moron-dranomasina dia mila mandeha adiny roa farafahakeliny ianao. Tsy lavitra izany, fa indraindray ianao tsy mahatsapa ny hanao dia. dia Safidy iray ny dobo monisipaly sy tsy miankina. Ora mangatsiaka vitsivitsy dia mamela anao hanadino ny hafanana ary hamoaka izany amin'ny vatana.
Betsaka ny dobo tsy miankina no manana vidiny lafo nefa ny monisipaly, mazava ho azy, mora vidy kokoa ary izy ireo dia afaka manana taha eo anelanelan'ny telo ka hatramin'ny dimy euro isan'olona. Eto aho mamela anao ny sasany amin'ireo malaza indrindra sy atolotra anao.
Dobo tsy misy fanamavoana izany 33 metatra ny halavany miaraka amina endrika anatiny tena kanto. Manana tafo mangarahara izy io ary ny varavarankely amin'ny sisiny izay mamela tara-masoandro tsara kokoa ary tsy manome anao ny fahatsapana ho voahidy. Izy io koa dia manana dobo kely kokoa sy mangatsiaka kokoa izay manalefaka na raha nanao fotoana lava be ianao mba hampiatoana ny hozatrao.
Any amin'ny Rue Edouard Pailleron 32 no misy azy, ao aorian'ny Buttes-Chaumont. Ny tobin'ny metro Bolivar na Butts Chaumont dia mamela anao akaiky. Mitentina 3, 10 euro ny fidirana fa raha mividy folo ianao dia mandoa 26 euro.
Raha mijanona ianao ao amin'ny Quarter Latina Tianao ity faritr'i Paris ity eto fa manana pisinina ianao: la Pontoise. Kely kely noho ilay teo aloha izy io: Metatra 25, fa io no iray amin'ny be mpitia indrindra any Paris satria na dia manana ora alina. Raha izany no izy, misokatra hatrany ny varavarana mandra-misasakalina ka misy onja hafanana any Paris no manana toerana famelomana tsara eto.
Ny haingo ny pisinina dia tsara, amin'ny loko fotsy sy manga ary mavo miaraka amin'ny sary hosodoko Aztec, a tafo mangarahara izay mamela ny fidiran'ny masoandro na ny haizin'ny alina ary efitrano manokana hanova akanjo izay hita eo amin'ny gorodona manodidina ny pisinina ihany. Hitanao ao amin'ny Rue de Pontoise, 19.
Raha ny anao no dobo olivazy dia soraty izao: tsy manana na inona na inona intsony izy ary mandeha kely noho ny 50 metatra ny halavany. Amin'ity habe ity dia matetika no toerana hanaovana fifaninanana filomanosana sy fifaninanana ary ampiasain'ny sekoly eo an-toerana ihany koa.
Raha ny marina, dia naorina tamin'ny 1924 amin'ny fotoan'ny Lalao Olaimpika. Manana goavana izy io tafo azo esorina, plexiglass ary arched, zavatra izay mahatonga azy io hahafinaritra kokoa. Izy io dia manana rivotra taloha, saika rivotra sovietika, saingy tena lehibe sy mampamono.
Manana bar eo amin'ny rihana voalohany izy ary eo amin'ny Avenue Avenue, 148. Manomboka amin'ny 11:45 maraina ary mitentina 3 euro ny fidirana.
Ity pisinina misy anarana vehivavy ity, mpandihy vahiny mainty izay avy any Etazonia ary tamin'ny lafiny iray dia teo alohan'i Mia Farrow sy Angelina Jolie tamin'ny fananganana zanaka sy fananganana fianakaviana lehibe, io dia amin'ny bacaza izay mitsingevana ao amin'ny Seine.
Amin'ny fahavaratra dia tsy misy tafo izany ka ao anaty rano ianao mijery ny ranon'ny Seine. Misy gorodona eo amin'ny sisiny, ny lava-drano lehibe dia 25 metatra ny lavany fa miampy dobo iray hafa ho an'ny ankizy ny 50 metatra toradroa, a solarium, hamman, sauna, gym ary jacuzzi. Ilaina ny mahafantatra fa mahalana izy io, rafitra fitaratra mahafinaritra noforonin'ny mpanao mari-pahaizana Robert de Busni.
Tamin'ny taona nitokanana ny Paris Plage no nanokanana azy ka malaza be izany ary tokony hialanao amin'ny andro mafana na farafaharatsiny mandritra ny ora be olona. Raha mandeha ihany ianao ary mahita olona betsaka dia afaka miandry kely foana miaraka amin'ny kafe na ranom-boankazo any amin'ny faritra fitsaharana ianao.
Hitanao izany ao amin'ny Port de la Gare, Quai Francois Mauriac, tsy lavitra ny Tranombokin'i Francois Mitterand sy Batofar.
Dobo iray izay nanomboka tamin'ny taona 60 ' saingy nohavaozina tanteraka tamin'ny taona 2008. Any amin'ny manodidina an'i Beaugrenelle no misy azy Ary mirentirenty be izy io amin'ny lafiny iray. Izy io dia 50 metatra ny elaIzy io dia sokajy olympika, na dia eo anilany aza misy lalana 15 metatra hafa lavitra.
Tsara ny efitrano fanovana ary mahazo rano ny rano fitsaboana manokana amin'ny sivana ozon fa tsy klôro ka tsara kokoa. Isaky ny adiny efatra dia misy otrikaretina sy voasivana ny rano.
Izy io koa dia manana tafo mihetsiketsika ka rehefa mamirapiratra ny masoandro dia azonao atao ny mankafy ny hafanany na manararaotra ny taratra mba hamafana. Raha te handositra olona ianao na manana alina mafana dia azonao atao ny manararaotra azy ireo ora fisokafana vao maraina: 7 maraina!
Ity dobo ity dia miafina amin'ny kianja kely amin'ny fiandohan'ny rue des Filletes. Ny firafitra dia vita amin'ny vy sy vera, misy tafo mangarahara. Raha ny marina dia misy dobo roaNy iray dia 25 metatra ny halavany misy rihana roa manodidina azy misy efitrano miova ary 14 metatra hafa lava kokoa, mangina kokoa. Araka ny nolazaiko dia vera ny tampon-trano ary lasa ny masoandro. Ny tena izy dia toerana misy olona marobe, eny fa na dia any Paris aza dia hadinon'izy ireo fa misy izy io, ka vao mainka ratsy kokoa. milamina tokoa.
Any amin'ny rue des Filletes no misy azy, ary miala eo akaikinao ny Porte de la Chapelle na ny gara Marz Dormy. Ny sarany dia 3 euro sy tapakila folo, 24 euro.
Ity dobo ity dia miorina eo afovoan-tany ary ao anatin'ny trano fanatanjahantena monisipaly. Tsy dobo filomanosana io fa tsara sy jereo zaridaina maitso tsara Voaravaka fiangonana neo-Gothic La Sainte Odile aza izy io. Izy io dia 25 metatra ny ela ary mifangaro ny efitrano fanovana. Manana valizy maro izy ireo hitahiry ny fanananao ary tranokalan'ny fianakaviana izany matetika.
Ao amin'ny boulevard de Reims, 36 taona, misokatra fito andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 10 maraina ary amin'ny metro, midina ao amin'ny gara Porte de Champerret na Pereire. Ny vidim-pidirana dia 1 euro ka hatramin'ny 70 euro ary ho an'ny tapakila folo dia 24 euro ny vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Paris » Fahavaratra any Paris, ny dobo tsara indrindra hangatsiatsiaka